”Diinta xitaa ma yaqaanno!” – Hooyada wiil Soomaali ah oo Isniinta la musaafurinayo oo baaqii ugu dambeeyay u dirtay Dowladda Canada! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Diinta xitaa ma yaqaanno!” – Hooyada wiil Soomaali ah oo Isniinta la...
”Diinta xitaa ma yaqaanno!” – Hooyada wiil Soomaali ah oo Isniinta la musaafurinayo oo baaqii ugu dambeeyay u dirtay Dowladda Canada!
(Ontario) 21 Agoosto 2019 – Hooyada wiil Soomaali ah oo Canada yimid bartamihii 90-meeyadii ayaa baaq baryo ah u dirtay maamulka Canada, si aan loo musaafurin wiilkeeda Cabdullaahi Cilmi oo 34-jir ah.
Hooyo Faduma Isse oo loo tarjumayo ayaa sheegtay in wiiilkeeda oo dib loogu celiyo Somalia oo aanu waxba ka aqoonin ay ka dhigan tahay “in toogasho lagu xukumay.”
“Way gabeen wiilkayga, waayo aniga gacantayda kuma jirin,” ayay tiri iyadoo dowladda Ontario ku eedaysay inay wiilkeeda Elmi, uga dhaaratay dhalashada dalka Canada tiiyoo uu dalkaa joogey 24 sano, isagoo ku yimi 10.
“Wuu dhimanayaa haddii uu Somalia tago, luuqadda ma yaqaan, dhaqanka ma yaqaan, diintana ma yaqaan.” ayay ku doodday.
Sida ay sheegeen qarreenkiisa Idowu Ohioze, Cilmi oo la musaafurin lahaa Arbacada maanta ah ayaa dib loo dhigay ilaa Isniinta soo aaddan, Agoosto 26. Ohioze ayaa samaynaya dood ku aaddan in halista Somalia ku qabsan kartaa ay ka wayn tahay, midda ah in lagu sii hayo Canada.
Cilmi ayaa leh diiwaan dembi oo dheer oo ay ka mid yihiin waxyeellooyin dhowr ah oo uu gaystey, iyo inuu xirnaa muddo ka badan 6 bilood, taasoo qofkii aan dhalasho haysanin u fasaxaysa in la musaafuriyo marka uu xukunka dhamaysto.
‘Iyagaa wiilkayga dayacay!’
Cilmi oo Cana yimi 1994-kii kaddib markii uu Somalia kasoo cararay, isagoo ayeeyadii xero qaxooti kula noolaa, ayaa markiiba waxay maamulka Canada ka qaateen iyagoo geliyay meelaha ilmaha lagu xanaaneeyo ee dowalddu maamusho.
Ha yeeshee, markii uu 16 jir ahaa wuxuu taagnaa jidadka, isagoo galaangal u yeeshay badwaynta dembiyada iyo daroogada, taasoo sida uu qorayo CBC ay sabab u ahayd dhibkii kasoo gaarey Dagaalkii Sokeeye ee Somalia.
Cilmi ayuu qarreenkiisu sheegay in hay’aadkii dowladda sida Daryeelka Carruuta ee gacanta ku hayay aysan u dalbin dhalashada Canada xilligii ku habboonaa, iyadoo mar uu isagu dalbaday 2010-kii loo sheegay in aan haatan laga gaarin oo aanu xaq u lahayn.
Abdoul Abdi, oo ah wiil kale oo Soomaali ah oo isagoo yar yimid gobolka Nova Scotia sanaddii 2000, ayaa sidoo kale loo jaray in la musaafuriyo kaddib markii dembiyo badan lagu helay.
Sheeko kale oo tan u eg, sanadkii tegey ayay Maxamadda Federaalku soo saartay xukun ku saabsan in aan wiilkan la musaafurin karin maadaama ay dayaceen hay’aadka Daryeelka Carruurta oo gacanta ku hayay carruurnimadiisii.
Ottawa ayaa sheegtay inay ixtiraamayso go’aanka Maxkamadda Federaalka oo aysan musaafurin doonin, balse taasi meesha kama saarayso in mustaqbalka la musaafurin karo haddii ay wax kale dhacaan.
Previous articleXOG: Baarlamanka Somalia oo mooshin ka keenaya dowladda Kenya
Next articleDEG DEG: Kenya oo Jabuuti ka guulaysatey & wax wayn oo ay u dhibi karto Somalia